UNksz Helen's Phantsi Phantsi-Bucala, Ubutofotofo & nolonwabo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguWes, John, And Thomas
Ubutofotofo baBucala uNkskz Helen's Down Under, owayekhe walikhaya lokuziqhelanisa nebhendi kunye nemidlalo yepoker ngoku ihlaziywe ngobumnandi ngokuhonjiswa ngokuhombisa kunye neemeko ezingqongileyo ezitofotofo. Eli ligumbi elingaphantsi elihlaziyiweyo elinomnyango walo owahlukileyo, ibhafu, ikhitshi kunye negumbi lokuhlamba impahla ekhayeni lam. Kukho phantse i-700 sq yeenyawo zokusebenzisa okanye ukuba ufuna indawo yangasese okanye i-pad pad. Isitayile seLoft, akukho mnyango wabo kwigumbi lokulala. Asivali iintsuku kwaphela ukuba ayifumaneki. Asizivumeli izilwanyana zasekhaya njengoko umninimzi ekwaliwa.
Ukuhlala apha iminyaka emininzi sinokukukhokelela kwiindawo ezininzi ezinomtsalane zasekhaya kunye neendawo zokutyela. Kukho iicawe ezi-4 kumgama wokuhamba. Cela ukukhenketha kwiigadi eziPhakamileyo, ichibi laseKoi, iinyosi. UJohn ngumgcini weenyosi okhutheleyo ... Njengenyani sigcina ubusi obenziwe kanye apha endlwini ukuze iindwendwe zethu zisebenzise...
Ndiyayithanda nje? sigcina unikezelo olulinganiselweyo oluthengiswayo kwiindwendwe zethu njengoko olu busi luhlala luthengisa xa siyikhulula eluntwini. Ufuna ukwazi ngakumbi mbuze nje. Iinyosi utsho? Zimalunga neemitha ezingama-70 ukusuka ngasemva kwaye kukho ucingo lweenyawo ezisi-9 phakathi komnyango ongasemva kunye neenyosi. Iinyosi zobusi aziyi kukukhathaza ngaphandle kokuba uzikhathaze. Kutheni le nto sigqibe kwelokuba senze le nto uyibuzayo? Sihambe kakhulu kwaye bendihlala ndisithi ukuba sinendawo esabelana ngayo siya kuba neebhedi ezintle (siyenza ibhedi yenziwe ngu-Olee bafumana amanqaku amahle) Ndifuna into yokujonga (sinobugcisa obukhulu !!) , Ndifuna itekhnoloji enkulu kunye neeTV ezintle (ndiyifumene, nemibuzo esiya kuyiphendula). Ndiyakucaphukela ukuhlala kwiindawo ezinephepha le-wifi splash okanye ixesha lokuphuma okanye ngalo lonke ixesha uhamba kufuneka usayine kwakhona. Awuzukuyifumana loo nto kwindawo yethu okanye i-bandwidth ethintelweyo. Xa ndihamba ndithatha intonga ye-USB enemiboniso bhanyabhanya kuyo, amaxesha amaninzi iTV kwindawo endihlala kuyo ayinanxibelelwano okanye azikho krelekrele ngokwaneleyo ukudlala iimuvi ngale ndlela. Uya kukwazi ukwenza oku kwindawo yethu. Ngaba unayo iakhawunti yeNetflix? Zonke iiTV zethu ziqhagamshelwe kwaye zi-SMART kwaye zineNetflix elayishiwe kuzo. Udinga uncedo cela nje. Enye into malunga nendawo yethu - Iphepha lendlu yangasese elilungileyo (ndifuna nditsho ngaphezulu- lol) kunye neetawuli zeHotel Luxury kunye namashiti. Enye yezilwanyana zam ezifuywayo xa ndihamba kulapho ndingaziplaga phi iitshaja zefowuni okanye ilaptop yam? Isonjululwe kwindawo yethu onke amagumbi anezibane ekulula ukufikelela kuzo kwiiplagi. Iiwotshi - Zonke zethu zinezibuko lentlawulo ye-USB kunye neefowuni ezinkulu ezibonwa lula kwaye ukongezelela koko ziprojekthi ixesha kwisilingi. Amanzi ashushu uyabuza? Sifakele iitanki ezi-2- 50 zeegaloni zamanzi ashushu ngokudibeneyo, zanele ishawari yemizuzu eyi-8 7 (i-avareji) umva ukuya ngasemva ngaphandle kokuphuma.
Uya kufumana ntoni kwindawo yakho onokuthi uyisebenzise-
Ngokuqhelekileyo sigcina amanzi efrijini kwaye ngamanye amaxesha isoda okanye ezinye iziselo. Ukutya isidlo sakusasa sigcina iibar zeBrekfesi, i-oatmeal ekhawulezileyo, iChocolate eHot, iti ezahlukahlukeneyo, ikofu kunye neekhrimu kunye nezimuncumuncu. Kananjalo ngamanye amaxesha uya kufumana amashwamshwam okanye ipopcorn yemicrowave, zincede nje.
Sifuna impendulo yakho--- Sifuna ukuba le ibe yeyona ndawo ilungileyo eRoanoke ukuhlala- sixelele njani? Yiza uhlale nathi, uya kuvuya ngokuba uyenzile.
4.98 · Izimvo eziyi-470
Kusekwe indawo ehlala abantu abadala kumantla edolophu yaseRoanoke (iikhilomitha ezi-2.3 ukuya kwimizuzu esi-8). Ifakwe ibhloko enye ecaleni kwendlela yaseWilliamson, elungele iindawo zokutyela ezininzi, ivenkile, imisebenzi yangaphandle, iindlela, iindawo ezithengisa utywala, iiwineries, kunye neBlue ridge Parkway enkulu. Ekwindla hamba uye kuMnyhadala wamaGrike, okanye uchithe impelaveki xa kusenzeka iMotor Madness ukuba ungumlandeli wemoto yakudala.
Umbuki zindwendwe ngu- Wes, John, And Thomas
Ukusebenzisana kuxhomekeke kuwe, sixakeke kakhulu kodwa sinokuhlala nawe ukuba uyafuna kwaye xa sifumaneka ... Uthatha isigqibo. NjengeeGadi? Koi Ponds? Ukugcinwa kweenyosi? Ukuba unomdla cela ukhenketho njengoko ixesha livuma.
UWes, John, And Thomas yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Roanoke